ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ (၁၃. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာစေရေး အခွင့်အလမ်းဖော်ဆောင်ပေးမည့် အစီအမံများရှိလျှင် ရှင်းလင်း ချပြနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-ခေါင်လန်ဖူး-ညီတားဒီလမ်း (၅၅) မိုင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ချီလာဝါဒီနှင့် အဘွန်ထန်ကြားရှိ ပျက်စီး နေသည့် လမ်း၊ တံတားများအား ဖောက်လုပ်ပြုပြင် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင်‌့အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော်မှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အဆက်ဆက် ကြွေးပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိသော ငွေ (၂၈၈၀.၅၀၀) သန်းအား ယနေ့အထိမည်မျှ ပေးသွင်းပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိလိုခြင်းနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-ပေါက်တူးတောင် ချောင်းကူးတံတားနှင့် ကမ်းထောင်ကြီး-သရက်တောင်မြို့၊ ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းအား မည်သည်‌့ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြီးဆောင်ရွက်ပေးမည်နှင့် မြေသားလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် မည်သည်‌့ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခ
(င)-ရန်ကုန်မြို့အဝင်လမ်းမကြီးများအား လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ လမ်းမီးများထွန်းရန်၊ မြေယာရှုခင်း (Landscape)များ ပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ပင်လယ်လေး(လပွတ္တာ)ကြိုးတံတားသည် ပညာရှင်များ၏စစ်ဆေးမှုများအရ မူလခံနိုင်ဝန်အား ၃၆ တန်မှ ၅၀ % ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့် လျော့ကျနေမှုကြောင့် တန် ၆၀ ခံ လုံခြုံစိတ်ချရသော တံတားအသစ် တစ်စင်းကို မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန
(ဆ)-ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆောင်ရွက်နေသော Eco Green City စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်က ရသင့်ရထိုက်သည့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုရရှိအောင် မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်